ဥပဒဖေောကျဖကျြနသေူတှကေ နိုငျငံသားစိစဈရေးကို ဥပဒမေဲ့ လုပျနကွေသလား – Kyaw Zaw Oo's Blog
August 27, 2016 March 1, 2019 kyaw zaw oo
ဥပဒဖေောကျဖကျြနသေူတှကေ နိုငျငံသားစိစဈရေးကို ဥပဒမေဲ့ လုပျနကွေသလား
[ Zawgyi version here ] [ Unicode versiion below ]
ဥပဒေဖောက်ဖျက်နေသူတွေက နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကို ဥပဒေမဲ့ လုပ်နေကြသလား
Written by ဦးကျော်ဇောဦး၊ ၂၆-၀၈-၂၀၁၆
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရက်ကျော်က ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ ANP တို့ဟာ အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ (RSG) ဘက်က နယ်/လုံဝန်ကြီး၊ ဥပဒေချုပ် နဲ့တကွ ရဲ ပြည်နယ်မှူး၊ စသုံးလုံး ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး နဲ့ လ၀က ပြည်နယ်မှူးတို့ တက်ရောက်ကြတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ဘက်က ဒေါ်အေးနုစိန်၊ ဦးကျော်ဇောဦး၊ ဦးထွန်းအောင်သိန်း နဲ့ ဦးအောင်ဝင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ANP ဘက်ကဒီကိစ္စကို သီးခြားတံခါးပိတ် ဆွေးနွေးကြမယ့်သဘောလို့ နားလည်ထားခဲ့ပေမယ့် ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့က မီဒီယာကို အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာပဲ အဆင်သင့် ခေါ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရှေ့ကနေပြီး နယ်/လုံဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း နဲ့ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်တို့က ဘူးသီးတောင်မှာ မြို့နယ် စုံစစ် အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မြို့နယ်အဆင့် အရာရှိအချို့ကို ဘူးသီးတောင်မြို့သား ၄၀၀ လောက်က မြို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေ ဆိုပြီး ကြေငြာခဲ့ကြတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ပြန်နွှေး ပါတယ်။ (ALP က ဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးထွန်းကိစ္စ ကို သူတို့ဘက်က ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဒီကိစ္စကို ပြောဖို့ ချိန်းထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ပြည်နယ် ရဲမှူးက ရက်(၁၀၀) စီမံချက်အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က နားထောင် ပေးခဲ့ပါတယ်။)
ရခိုင်ပြည်နယ် လ၀က ပြည်နယ်မှူးက လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို နိုင်ငံသား စိစစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဘူးသီးတောင်က မြနန္ဒာခင် လို့ အမည်ရတဲ့ ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို နိုင်ငံသားပေးတာဟာ ဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်ပါတယ် လို့ သက်သေပြနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းတယ်။ ဘိုးဘွားလေးဦးမှာ လေးဦး မဟုတ်ရင်တောင် သုံးဦးက သုံးခေါက်ချိုးကတ် ကိုင်ဆောင်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် လို့ ရှင်းပြတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဘူးသီးတောင်အမတ် ဦးထွန်းအောင်သိန်းက ဘူးသီးတောင် ဖြစ်စဉ်ကို သူပြန်ရှင်းပြပါတယ်။ ရခိုင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးစေလွှတ်တဲ့ အတွက် အဲသည်ကိစ္စကို ဘူးသီးတောင်ကို သွားရောက်စုံစမ်းလို့ မနေ့ကမှ ပြန်ရောက်လာတာ ဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဘာမှ တကယ်တမ်းစိစစ်တာ မလုပ်ဘဲနဲ့ အဲသည်ဘင်္ဂါလီတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်သင့်ကြောင်း လက်မှတ်ထိုးထောက်ခံပေးရတဲ့ အရာရှိတွေဟာ ဒီအတိုင်းပဲ လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရတာ ဖြစ်ကြောင်း မေးမြန်း စုံစမ်း တွေ့ရှိခဲ့တယ် လို့ သူက ပြောပြပါတယ်။ သည်လို ဥပဒေနဲ့ မညီညွှတ်ဘဲ ဘင်္ဂါလီတွေကို နိုင်ငဲသားဖြစ်ဖို့အတွက် မဟုတ်မဟတ် ထောက်ခံလက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတဲ့အတွက် မြို့သူမြို့သားတွေက သည်လို တုံ့ပြန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မြနန္ဒာခင် ကိစ္စကို ပြောရာမှာ သူ့ ဖခင်နဲ့ မိခင် နှစ်ဦးစလုံးဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ လျှောက်ထားခဲ့တာ အထောက်အထားမပြည့်စုံတဲ့အတွက် ပယ်ချခြင်းကို ခံခဲ့ရတယ်၊ ဒီတော့ အမေအဖေကို နိုင်ငံသားမပေးနိုင်ဘဲနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး သားသမီး ဖြစ်သူကို နိုင်ငံသားပေးလို့ မရနိုင် ပါ ဘူး။
ဦးထွန်းအောင်သိန်း ပြောအပြီးမှာ ANP က ဦးကျော်ဇောဦး က လ၀က ပြည်နယ်မှူုး ဦးဝင်းလွင်ကို မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ အခုနက မြနန္ဒခင်ကိစ္စမှာ အဲသည် အမျိုးသမီး ငယ်ကို ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၇ အရ နိုင်ငံသားပေးခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် ဟုတ်ပါသလား လို့မေးပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးဝင်းလွင်က ပုဒ်မ-၇ လို့ အတိအကျ ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဥပဒေနဲ့ အညီပေးခဲ့တယ် လို့ပဲ မှတ်ထားစေချင်တယ် လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးကျော်ဇောဦးက ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေရဲ့ဘယ်ပုဒ်မအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာကို အတိအကျ ပြောပါလို့ထပ်မေးတဲ့ အခါ၊ ဦးဝင်းလွင်ဟာ မြနန္ဒာခင် ဖိုင်ကို ကောက်လှန်လို့ လက်ညှိုးနဲ့ ထောက်ပြပြီး ပုဒ်မ-၇(က) အရ ပေးခဲ့တယ်လို့ ဖြေပါတယ်။ ဒီတော့ ဦးကျော်ဇောဦးက ပါလာတဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို ကောက်လှန်ပြီး ဖတ်ပြပါတယ်။ ပုဒ်မ-၇(က) က “နိုင်ငံသားမိဘ နှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူများ” လို့ ပြောထားတယ်။ မိဘနှစ်ပါးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့ မြနန္ဒာခင်ကို နိုင်ငံသားပေးတာဟာ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီး နိုင်ငံသား ပေးတာ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဦးကျော်ဇောဦးက ပြောပါတယ်။ ဦးဝင်းလွင်က ဒေါသတကြီးနဲ့ တုံ့ပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လ၀က လုပ်သက် နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သူရဲ့ လက်ထောက် (ဒုပြည်နယ်မှူးလို့ ထင်ပါတယ်) ကို ရှင်းပြခိုင်းပါတယ်။ ဥပဒေမှာ မပါလည်း ဘာကြောင့် နိုင်ငံသားပေးလို့ရတယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြခိုင်းပါတယ်။
အဲသည် လ၀က အရာရှိက စရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က နှစ်ပိုင်းစဉ်းစားပါတယ် တဲ့ . . . ၊ နိုင်ငံသားဥပဒေ အတည်ဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၂ မတိုင်ခင်မွေးတဲ့ လူတွေကို တစ်ပိုင်း စဉ်းစားတယ် တဲ့၊ ၁၉၈၂ နောက်ပိုင်း မွေးတဲ့သူတွေကို တစ်ပိုင်းစဉ်းစားတယ် လို့ သူက စရှင်းပါတယ်။
(ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိဘဲ ဒီလိုမျိုး နှစ်ပိုင်းခွဲသတ်မှတ်ပြီး ဒီလိုမျိုး လုပ်ကြံ လိမ်ပေါက် ဖောက်ပြီး နိုင်ငံသားပေးဖို့လုပ်နေကြတာကို မိမိတို့က ကြားဖူးသိရှိနေ ပြီး သား ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီတော့ သူတို့ အဲသည်လံကြုတ်ကို အစအဆုံး အရှည်ကြီးပြောမှာကို နားမထောင် တော့ဘဲ ကြားဖြတ်ပြီးတော့ အဲသည် လ၀က အရာရှိကို ဦးကျော်ဇောဦးက မေးပါ တယ်။ အဲသလို ၁၉၈၂ မတိုင်ခင် မွေးတဲ့သူတွေကို တစ်ပိုင်းခွဲ၊ ၈၂ နောက်ပိုင်းမွေးတဲ့ သူတွေကို နောက်တစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ နှစ်ပိုင်းစဉ်းစားပါ ဆိုပြီးတော့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါသလား လို့ ဦးကျော်ဇောဦးက မေးပါတယ်။ အဲသည် လ၀က အရာရှိ ဘာမှမပြော နိုင်ဘဲ ပြန်ထိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ပြည်နယ်လ၀ကမှူး ဦးဝင်းလွင်က တစ်ခန်းထပါတယ်။ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ပြော ပါတယ်။ ဒီလူ (ဦးကျော်ဇောဦး) ပြောတာကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါ၊ ဒီလူပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဟာ မြနန္ဒာခင်ရဲ့ မိဘနှစ်ဦးကို နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အထက်ကို တင်ရတော့မယ်၊ မဖြစ်မနေတင်ရတော့မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သားသမီးက နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး မိဘက နိုင်ငံသားမဖြစ်သေးလို့ ဆိုပြီးတော့ ဦးဝင်းလွင်က ထပြောပါတယ်။ (ဒီလ၀က အရာရှိတွေဟာ powerpoint တွေနဲ့ အခြားမြို့တွေမှာ ရှင်းပြနေတာကို ပြန်ကြားရပါ တယ်။ အခုလည်းပဲ ကိုယ်တိုင် မြင်ခဲ့ရတာပေါ့။ အဲသည် ဘင်္ဂါလီတွေဟာ အိမ်ထောင်စု စာရင်း တို့၊ မြေခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ချလံတို့ကို ပြပြီး ဒီလူတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်ထိုက်ပါတယ် လို့ သူတို့က ပြောနေတယ်။ အဲဒါတွေရှိရင် နိုင်ငံသားပေးလိုက်ပါလို့ ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်း ထားတာ မရှိဘူး ကျွန်တော့် စကားထဲမှာ ထည့်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။)
ဒီတော့ ဦးကျော်ဇောဦးက ပြန်ပြောပါတယ်။ ဥပဒေမှာ ဒီလိုတော့ မပြဋ္ဌာန်းထားဘူး ထင်ပါတယ် လို့ . . . ၊ သားသမီး ဖြစ်သူကို ဥပဒေနဲ့ မညီဘဲ တရားမဲ့ နိုင်ငံသားပေး လိုက်တဲ့ အတွက် အဲဒါကို ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက် မိဘဖြစ်သူတွေကို နိုင်ငံသားပေးလိုက်ပါ လို့ မပြဋ္ဌာန်းထားပါဘူး လို့ ချေပပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ANP ဘက်ခြမ်းကို ဦးဆောင်လာတဲ့ ဒေါ်အေးနုစိန်က ဥပဒေကြောင်း အရ ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်။ ဒေါ်အေးနုစိန်ဟာ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦး ဖြစ်သလို တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းက သုံးခေါက်ချိုးကတ်လို့ခေါ်တဲ့ အမတကတ်တွေကိုလက်ဝယ်ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ရန် အကြောင်း လုံလောက်တယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိ်တဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြပါတယ်။ သုံးခေါက်ချိုးကတ် တွေဟာ ဒီနေရာမှာ လူတွေကိုမှတ်ပုံတင်တုံးက ဒီလူရှိနေခဲ့တယ် ဆိုတာကို ပြတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကတ်ပြားဟာ ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ အလျဉ်း မဖြစ်စေရ လို့ တောင် ကတ်ပြားပေါ်မှာတောင် ရေးလို့ပါပါတယ်။ ဒီကတ်ပြားပါရင် နိုင်ငံသားပေးပါ လို့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားချက် လုံးဝမရှိပါဘူး။
(အခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်နေတဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ သုံးခေါက်ချိုးကတ် ကိုင်ထားတဲ့သူတွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ အကြောင်းလုံလောက်တယ် ဆိုတဲ့ ယူဆချက် အပေါ် အခြေခံပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လက်ရှိ တည်ဆဲ ဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေ နဲ့ ညီညွတ်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။)
ရခိုင်ပြည်နယ်က နိုင်ငံသားစိစစ်မှုကို ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်နယ်စုံစစ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း နိဂုံးချုပ်စကားပြောတဲ့အခါ ကြားလိုက်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဒါတွေကို တစ်ခါမှ မကြားဖူးသေးတဲ့အကြောင်း ဒီလိုမျိုး ANP ဘက်ကရှင်းပြတာဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အဲသလိုသဘောမျိုး ပြောသွား ပါ တယ်။
အစည်းအဝေးပြီးလို့ ကိုယ့်စာရွက်စာတမ်းတွေကို သိမ်းပြီး ပြန်မယ်လို့ ထကြတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်းက ကျွန်တော်တို့လေးဦးဘက်ကို စကားလှမ်းပြောပါတယ်။ . . . ဘူးသီးတောင်က စာရွက်တွေက ကျွန်တော်တို့ ဆီကိုတော့ မရောက်သေးဘူး၊ ကျွန်တော်တို့သာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘူးသီးတောင်က လူတွေလို အမျိုးသားသစ္စာဖောက်တွေ ဖြစ်ပြီ ဗျ လို့ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ လှမ်းပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း သူ့ကို ကြည့်ပြီး ခွက်ထိုးခွက်လှန် ရယ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ်ကတော့ ဒီဥပဒေမဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ ရပ်တန့်သွားပြီလို့ မဆိုနိုင်တဲ့ အတွက် အခြေအနေက ရယ်စရာတော့ မကောင်းသေးပါဘူး။
အဲသည်နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ANP တို့ ဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်မှာ တွေ့ရှိရချက် ကတော့ – ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရက ပါဝင်ဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသား ပြု ခွင့်ရသူ ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဖြစ်စဉ် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်) ဟာ တည်ဆဲ ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ပြီး နိုင်ငံသား ပေးဖို့ လုပ်နေတာကို တွေ့နေရတယ် လို့ ANP ဘက်က ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့တယ်။
နောက်ပြီးတော့ – ၈၂ ဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ-၇(က)ကို ကိုးကားပြီး ဘူးသီးတောင်က ဘင်္ဂါလီ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို နိုင်ငံသားပေးလိုက်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် လ၀ကရဲ့ ပြည်နယ်မှူး ဦးဝင်းလွင်ဟာ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်ပြီး နိုင်ငံသားမရသင့်သူကို နိုင်ငံသားရအောင် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် တရားရင်ဆိုင်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လုပ်ရပ် ဟာ ၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၉ နဲ့ ငြိစွန်းပါတယ်။ ပုဒ်မ-၁၉ အရ ထောင်ဒဏ် နဲ့ ငွေဒဏ် ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဒ်မ-၁၉ က ဒီလိုဆိုပါတယ်။ “နိုင်ငံသား တစ်ဦးသည် မသမာသောနည်းလမ်းဖြင့် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ လက်မှတ်ကို သူတစ်ဦးရရှိရန် အားပေးကူညီလျှင် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ် နှင့် ငွေဒဏ် တစ်�သောင်းကို ကျခံစေရမည်”
ဒီလို ပြစ်ဒဏ်ကျခံထိုက်တဲ့ ပြစ်မှုနဲ့ ငြိစွန်းကြောင်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်/လုံဝန်ကြီး နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ဥပဒေချုပ်တို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတည်းက ကောင်းစွာ သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အတွက် ကြီးလေးစွာတာဝန်ရှိသူများ ဖြစ်ကြတဲ့အလျောက် ၎င်းတို့ရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ ပြစ်မှုကျုးလွန်ခြင်းကို မျက်စိမှိတ်ကာ မမြင်ချင်ယောင် မဆောင်ကြဖို့ရာ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။
စစ်တွေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)
၂၀၁၆-ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၆) ရက်
[ Unicode version here ]
Written by ဦးကြျောဇောဦး၊ ၂၆-၀၈-၂၀၁၆
ပွီးခဲ့တဲ့ တဈရကျကြျောက ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့နဲ့ ANP တို့ဟာ အစိုးရရဲ့ နိုငျငံသား စိစဈရေးလုပျငနျးစဉျနဲ့ ပတျသကျလို့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရ (RSG) ဘကျက နယျ/လုံဝနျကွီး၊ ဥပဒခြေုပျ နဲ့တကှ ရဲ ပွညျနယျမှူး၊ စသုံးလုံး ပွညျနယျညှနျကွားရေးမှူး နဲ့ လဝက ပွညျနယျမှူးတို့ တကျရောကျကွတယျ။
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) ဘကျက ဒျေါအေးနုစိနျ၊ ဦးကြျောဇောဦး၊ ဦးထှနျးအောငျသိနျး နဲ့ ဦးအောငျဝငျးတို့ တကျရောကျခဲ့ကွပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ ANP ဘကျကဒီကိစ်စကို သီးခွားတံခါးပိတျ ဆှေးနှေးကွမယျ့သဘောလို့ နားလညျထားခဲ့ပမေယျ့ ရခိုငျအစိုးရအဖှဲ့က မီဒီယာကို အစညျးအဝေးခနျးထဲမှာပဲ အဆငျသငျ့ ချေါထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ရှကေ့နပွေီး နယျ/လုံဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးထိနျလငျး နဲ့ ပွညျနယျဥပဒခြေုပျတို့က ဘူးသီးတောငျမှာ မွို့နယျ စုံစဈ အဖှဲ့ဝငျတှေ ဖွဈကွတဲ့ မွို့နယျအဆငျ့ အရာရှိအခြို့ကို ဘူးသီးတောငျမွို့သား ၄၀၀ လောကျက မွို့အစညျးအဝေးလုပျပွီး အစညျးအဝေး ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ အမြိုးသားသစ်စာဖောကျတှေ ဆိုပွီး ကွငွောခဲ့ကွတဲ့ ဖွဈရပျကို ပွနျနှေး ပါတယျ။ (ALP က ဗိုလျမှူးခိုငျမြိုးထှနျးကိစ်စ ကို သူတို့ဘကျက ပွောပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့ဘကျက ဒီကိစ်စကို ပွောဖို့ ခြိနျးထားတာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ ပွညျနယျ ရဲမှူးက ရကျ(၁၀၀) စီမံခကျြအကွောငျးကို ရှငျးလငျးပွောပွပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က နားထောငျ ပေးခဲ့ပါတယျ။)
ရခိုငျပွညျနယျ လဝက ပွညျနယျမှူးက လကျရှိလုပျနတေဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို နိုငျငံသား စိစဈတဲ့ လုပျငနျးစဉျကို ရှငျးလငျးတငျပွတယျ။ နောကျပွီးတော့ ဘူးသီးတောငျက မွနန်ဒာခငျ လို့ အမညျရတဲ့ ဘင်ျဂါလီ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးကို နိုငျငံသားပေးတာဟာ ဥပဒနေဲ့ ညီညှတျပါတယျ လို့ သကျသပွေနိုငျဖို့ ကွိုးပမျးတယျ။ ဘိုးဘှားလေးဦးမှာ လေးဦး မဟုတျရငျတောငျ သုံးဦးက သုံးခေါကျခြိုးကတျ ကိုငျဆောငျခဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ လို့ ရှငျးပွတယျ။
ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ဘူးသီးတောငျအမတျ ဦးထှနျးအောငျသိနျးက ဘူးသီးတောငျ ဖွဈစဉျကို သူပွနျရှငျးပွပါတယျ။ ရခိုငျလှတျတျောဥက်ကဋ်ဌက တာဝနျပေးစလှေတျတဲ့ အတှကျ အဲသညျကိစ်စကို ဘူးသီးတောငျကို သှားရောကျစုံစမျးလို့ မနကေ့မှ ပွနျရောကျလာတာ ဖွဈတယျ။ ဘင်ျဂါလီတှကေို ဘာမှ တကယျတမျးစိစဈတာ မလုပျဘဲနဲ့ အဲသညျဘင်ျဂါလီတှေ နိုငျငံသားဖွဈသငျ့ကွောငျး လကျမှတျထိုးထောကျခံပေးရတဲ့ အရာရှိတှဟော ဒီအတိုငျးပဲ လကျမှတျထိုးပေးလိုကျရတာ ဖွဈကွောငျး မေးမွနျး စုံစမျး တှရှေိ့ခဲ့တယျ လို့ သူက ပွောပွပါတယျ။ သညျလို ဥပဒနေဲ့ မညီညှတျဘဲ ဘင်ျဂါလီတှကေို နိုငျငဲသားဖွဈဖို့အတှကျ မဟုတျမဟတျ ထောကျခံလကျမှတျထိုးလိုကျကွတဲ့အတှကျ မွို့သူမွို့သားတှကေ သညျလို တုံ့ပွနျကွတာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး မွနန်ဒာခငျ ကိစ်စကို ပွောရာမှာ သူ့ ဖခငျနဲ့ မိခငျ နှဈဦးစလုံးဟာ နိုငျငံသားဖွဈဖို့ လြှောကျထားခဲ့တာ အထောကျအထားမပွညျ့စုံတဲ့အတှကျ ပယျခခြွငျးကို ခံခဲ့ရတယျ၊ ဒီတော့ အမအေဖကေို နိုငျငံသားမပေးနိုငျဘဲနဲ့ ဘယျလိုလုပျပွီး သားသမီး ဖွဈသူကို နိုငျငံသားပေးလို့ မရနိုငျ ပါ ဘူး။
ဦးထှနျးအောငျသိနျး ပွောအပွီးမှာ ANP က ဦးကြျောဇောဦး က လဝက ပွညျနယျမှူုး ဦးဝငျးလှငျကို မေးခှနျးထုတျပါတယျ။ အခုနက မွနန်ဒခငျကိစ်စမှာ အဲသညျ အမြိုးသမီး ငယျကို ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ-၇ အရ နိုငျငံသားပေးခဲ့တယျလို့ ပွောခဲ့တယျထငျပါတယျ ဟုတျပါသလား လို့မေးပါတယျ။ ဒီတော့ ဦးဝငျးလှငျက ပုဒျမ-၇ လို့ အတိအကြ ရယျလို့တော့ မဟုတျဘူး၊ ဥပဒနေဲ့ အညီပေးခဲ့တယျ လို့ပဲ မှတျထားစခေငျြတယျ လို့ ပွနျဖွပေါတယျ။ ဒီတော့ ဦးကြျောဇောဦးက ၁၉၈၂ နိုငျငံသားဥပဒရေဲ့ဘယျပုဒျမအရ နိုငျငံသား ဖွဈပေးခဲ့တယျ ဆိုတာကို အတိအကြ ပွောပါလို့ထပျမေးတဲ့ အခါ၊ ဦးဝငျးလှငျဟာ မွနန်ဒာခငျ ဖိုငျကို ကောကျလှနျလို့ လကျညှိုးနဲ့ ထောကျပွပွီး ပုဒျမ-၇(က) အရ ပေးခဲ့တယျလို့ ဖွပေါတယျ။ ဒီတော့ ဦးကြျောဇောဦးက ပါလာတဲ့ ၁၉၈၂ နိုငျငံသားဥပဒကေို ကောကျလှနျပွီး ဖတျပွပါတယျ။ ပုဒျမ-၇(က) က “နိုငျငံသားမိဘ နှဈပါးမှ မှေးဖှားသူမြား” လို့ ပွောထားတယျ။ မိဘနှဈပါးဟာ မွနျမာနိုငျငံသား မဟုတျတဲ့ မွနန်ဒာခငျကို နိုငျငံသားပေးတာဟာ ဥပဒကေို ဖောကျဖကျြကြူးလှနျပွီး နိုငျငံသား ပေးတာ ဖွဈတယျ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို ဦးကြျောဇောဦးက ပွောပါတယျ။ ဦးဝငျးလှငျက ဒေါသတကွီးနဲ့ တုံ့ပွနျပါတယျ။ ပွီးတော့ လဝက လုပျသကျ နှဈပေါငျး (၃၀)ကြျော ရှိပွီဖွဈတဲ့ သူရဲ့ လကျထောကျ (ဒုပွညျနယျမှူးလို့ ထငျပါတယျ) ကို ရှငျးပွခိုငျးပါတယျ။ ဥပဒမှော မပါလညျး ဘာကွောငျ့ နိုငျငံသားပေးလို့ရတယျ ဆိုတာကို ရှငျးပွခိုငျးပါတယျ။
အဲသညျ လဝက အရာရှိက စရှငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က နှဈပိုငျးစဉျးစားပါတယျ တဲ့ . . . ၊ နိုငျငံသားဥပဒေ အတညျဖွဈတဲ့ ၁၉၈၂ မတိုငျခငျမှေးတဲ့ လူတှကေို တဈပိုငျး စဉျးစားတယျ တဲ့၊ ၁၉၈၂ နောကျပိုငျး မှေးတဲ့သူတှကေို တဈပိုငျးစဉျးစားတယျ လို့ သူက စရှငျးပါတယျ။
(ဥပဒမှောပွဋ်ဌာနျးထားခွငျးမရှိဘဲ ဒီလိုမြိုး နှဈပိုငျးခှဲသတျမှတျပွီး ဒီလိုမြိုး လုပျကွံ လိမျပေါကျ ဖောကျပွီး နိုငျငံသားပေးဖို့လုပျနကွေတာကို မိမိတို့က ကွားဖူးသိရှိနေ ပွီး သား ဖွဈပါတယျ။)
ဒီတော့ သူတို့ အဲသညျလံကွုတျကို အစအဆုံး အရှညျကွီးပွောမှာကို နားမထောငျ တော့ဘဲ ကွားဖွတျပွီးတော့ အဲသညျ လဝက အရာရှိကို ဦးကြျောဇောဦးက မေးပါ တယျ။ အဲသလို ၁၉၈၂ မတိုငျခငျ မှေးတဲ့သူတှကေို တဈပိုငျးခှဲ၊ ၈၂ နောကျပိုငျးမှေးတဲ့ သူတှကေို နောကျတဈပိုငျးခှဲပွီးတော့ နှဈပိုငျးစဉျးစားပါ ဆိုပွီးတော့ ၁၉၈၂ နိုငျငံသား ဥပဒမှော ပွဋ်ဌာနျးထားပါသလား လို့ ဦးကြျောဇောဦးက မေးပါတယျ။ အဲသညျ လဝက အရာရှိ ဘာမှမပွော နိုငျဘဲ ပွနျထိုငျပါတယျ။
ဒီတော့ ပွညျနယျလဝကမှူး ဦးဝငျးလှငျက တဈခနျးထပါတယျ။ မတျတပျထရပျပွီး ပွော ပါတယျ။ ဒီလူ (ဦးကြျောဇောဦး) ပွောတာကို မှတျတမျးတငျထားပါ၊ ဒီလူပွောတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောဟာ မွနန်ဒာခငျရဲ့ မိဘနှဈဦးကို နိုငျငံသားဖွဈဖို့ အထကျကို တငျရတော့မယျ၊ မဖွဈမနတေငျရတော့မယျ၊ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သားသမီးက နိုငျငံသား ဖွဈပွီး မိဘက နိုငျငံသားမဖွဈသေးလို့ ဆိုပွီးတော့ ဦးဝငျးလှငျက ထပွောပါတယျ။ (ဒီလဝက အရာရှိတှဟော powerpoint တှနေဲ့ အခွားမွို့တှမှော ရှငျးပွနတောကို ပွနျကွားရပါ တယျ။ အခုလညျးပဲ ကိုယျတိုငျ မွငျခဲ့ရတာပေါ့။ အဲသညျ ဘင်ျဂါလီတှဟော အိမျထောငျစု စာရငျး တို့၊ မွခှေနျဆောငျထားတဲ့ ခလြံတို့ကို ပွပွီး ဒီလူတှေ နိုငျငံသားဖွဈထိုကျပါတယျ လို့ သူတို့က ပွောနတေယျ။ အဲဒါတှရှေိရငျ နိုငျငံသားပေးလိုကျပါလို့ ဥပဒမှောပွဋ်ဌာနျး ထားတာ မရှိဘူး ကြှနျတေျာ့ စကားထဲမှာ ထညျ့ပွောခဲ့ပါသေးတယျ။)
ဒီတော့ ဦးကြျောဇောဦးက ပွနျပွောပါတယျ။ ဥပဒမှော ဒီလိုတော့ မပွဋ်ဌာနျးထားဘူး ထငျပါတယျ လို့ . . . ၊ သားသမီး ဖွဈသူကို ဥပဒနေဲ့ မညီဘဲ တရားမဲ့ နိုငျငံသားပေး လိုကျတဲ့ အတှကျ အဲဒါကို ဖုံးကှယျဖို့အတှကျ မိဘဖွဈသူတှကေို နိုငျငံသားပေးလိုကျပါ လို့ မပွဋ်ဌာနျးထားပါဘူး လို့ ခပြေပါတယျ။
ဒီနောကျပိုငျးမှာ ANP ဘကျခွမျးကို ဦးဆောငျလာတဲ့ ဒျေါအေးနုစိနျက ဥပဒကွေောငျး အရ ရှငျးလငျးပွောကွားပါတယျ။ ဒျေါအေးနုစိနျဟာ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီရဲ့ ဒုဥက်ကဋ်ဌ တဈဦး ဖွဈသလို တရားလှတျတျောရှနေ့တေဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အဓိက အကွောငျးက သုံးခေါကျခြိုးကတျလို့ချေါတဲ့ အမတကတျတှကေိုလကျဝယျကိုငျထားတဲ့ သူတှဟော နိုငျငံသားဖွဈနိုငျရနျ အကွောငျး လုံလောကျတယျ လို့ မွနျမာနိုငျငံသား ဥပဒမှော ပွဋ်ဌာနျးထားခွငျးမရျှိတဲ့ အကွောငျးကို ရှငျးပွပါတယျ။ သုံးခေါကျခြိုးကတျ တှဟော ဒီနရောမှာ လူတှကေိုမှတျပုံတငျတုံးက ဒီလူရှိနခေဲ့တယျ ဆိုတာကို ပွတာသာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကတျပွားဟာ ဒီနိုငျငံသားဖွဈကွောငျး သကျသခေံ အလဉျြး မဖွဈစရေ လို့ တောငျ ကတျပွားပျေါမှာတောငျ ရေးလို့ပါပါတယျ။ ဒီကတျပွားပါရငျ နိုငျငံသားပေးပါ လို့ ၁၉၈၂ နိုငျငံသားဖွဈမှု ဥပဒမှောပွဋ်ဌာနျးထားခကျြ လုံးဝမရှိပါဘူး။
(အခု ရခိုငျပွညျနယျမှာ နိုငျငံသားစိစဈရေးလုပျနတေဲ့ ဖွဈစဉျမှာ သုံးခေါကျခြိုးကတျ ကိုငျထားတဲ့သူတှဟော နိုငျငံသားဖွဈဖို့ အကွောငျးလုံလောကျတယျ ဆိုတဲ့ ယူဆခကျြ အပျေါ အခွခေံပွီး နိုငျငံသားစိစဈရေးလုပျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာ လကျရှိ တညျဆဲ ဖွဈတဲ့ ၁၉၈၂ နိုငျငံသားဥပဒေ နဲ့ ညီညှတျခွငျးလုံးဝမရှိပါဘူး။)
ရခိုငျပွညျနယျက နိုငျငံသားစိစဈမှုကို ဦးဆောငျတဲ့ ပွညျနယျစုံစဈအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျမှူးကွီးထိနျလငျး နိဂုံးခြုပျစကားပွောတဲ့အခါ ကွားလိုကျပါတယျ။ သူတို့အနနေဲ့ ဒါတှကေို တဈခါမှ မကွားဖူးသေးတဲ့အကွောငျး ဒီလိုမြိုး ANP ဘကျကရှငျးပွတာဟာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရာ ရောကျတယျဆိုတဲ့အကွောငျး အဲသလိုသဘောမြိုး ပွောသှား ပါ တယျ။
အစညျးအဝေးပွီးလို့ ကိုယျ့စာရှကျစာတမျးတှကေို သိမျးပွီး ပွနျမယျလို့ ထကွတော့ ဗိုလျမှူးကွီးထိနျလငျးက ကြှနျတျောတို့လေးဦးဘကျကို စကားလှမျးပွောပါတယျ။ . . . ဘူးသီးတောငျက စာရှကျတှကေ ကြှနျတျောတို့ ဆီကိုတော့ မရောကျသေးဘူး၊ ကြှနျတျောတို့သာ လကျမှတျထိုးလိုကျလို့ကတော့ ကြှနျတျောတို့လညျး ဘူးသီးတောငျက လူတှလေို အမြိုးသားသစ်စာဖောကျတှေ ဖွဈပွီ ဗြ လို့ ရယျကြဲကြဲနဲ့ လှမျးပွောပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့လညျး သူ့ကို ကွညျ့ပွီး ခှကျထိုးခှကျလှနျ ရယျကွပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လောလောဆယျကတော့ ဒီဥပဒမေဲ့ ဖွဈစဉျဟာ ရပျတနျ့သှားပွီလို့ မဆိုနိုငျတဲ့ အတှကျ အခွအေနကေ ရယျစရာတော့ မကောငျးသေးပါဘူး။
အဲသညျနကေ့ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရနဲ့ ANP တို့ ဆှေးနှေးမှုဖွဈစဉျမှာ တှရှေိ့ရခကျြ ကတော့ – ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရက ပါဝငျဦးဆောငျလုပျနတေဲ့ နိုငျငံသားနဲ့ နိုငျငံသား ပွု ခှငျ့ရသူ ဆိုငျရာ စုံစမျးစဈဆေးရေး ဖွဈစဉျ (နိုငျငံသားစိစဈရေး လုပျငနျးစဉျ) ဟာ တညျဆဲ ၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒနေဲ့ ညီညှတျမှုမရှိတဲ့ အလုပျတှလေုပျပွီး နိုငျငံသား ပေးဖို့ လုပျနတောကို တှနေ့ရေတယျ လို့ ANP ဘကျက ထောကျပွပွောဆိုခဲ့တယျ။
နောကျပွီးတော့ – ၈၂ ဥပဒရေဲ့ ပုဒျမ-၇(က)ကို ကိုးကားပွီး ဘူးသီးတောငျက ဘင်ျဂါလီ အမြိုးသမီးငယျတဈဦးကို နိုငျငံသားပေးလိုကျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ လဝကရဲ့ ပွညျနယျမှူး ဦးဝငျးလှငျဟာ ဥပဒကေို ဖောကျဖကျြပွီး နိုငျငံသားမရသငျ့သူကို နိုငျငံသားရအောငျ လုပျပေးလိုကျတဲ့အတှကျ တရားရငျဆိုငျပွီး ပွဈဒဏျကခြံရမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့လုပျရပျ ဟာ ၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒေ ပုဒျမ-၁၉ နဲ့ ငွိစှနျးပါတယျ။ ပုဒျမ-၁၉ အရ ထောငျဒဏျ နဲ့ ငှဒေဏျ ကခြံရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပုဒျမ-၁၉ က ဒီလိုဆိုပါတယျ။ “နိုငျငံသား တဈဦးသညျ မသမာသောနညျးလမျးဖွငျ့ နိုငျငံသား သို့မဟုတျ ဧညျ့နိုငျငံသား သို့မဟုတျ နိုငျငံသားပွုခှငျ့ရသူ လကျမှတျကို သူတဈဦးရရှိရနျ အားပေးကူညီလြှငျ ထောငျဒဏျ ခုနဈနှဈ နှငျ့ ငှဒေဏျ တဈ�သောငျးကို ကခြံစရေမညျ”
ဒီလို ပွဈဒဏျကခြံထိုကျတဲ့ ပွဈမှုနဲ့ ငွိစှနျးကွောငျးကို ရခိုငျပွညျနယျ နယျ/လုံဝနျကွီး နဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ ဥပဒခြေုပျတို့က ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ဒီတှဆေုံ့ပှဲမှာတညျးက ကောငျးစှာ သိရှိခဲ့ကွပွီးဖွဈပါတယျ။ ဖျောပွပါ ပုဂ်ဂိုလျနှဈဦးဟာ ရခိုငျပွညျနယျရဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု အတှကျ ကွီးလေးစှာတာဝနျရှိသူမြား ဖွဈကွတဲ့အလြောကျ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ မကျြစိရှမှေ့ာ တှမွေ့ငျခဲ့ရတဲ့ ပွဈမှုကြုးလှနျခွငျးကို မကျြစိမှိတျကာ မမွငျခငျြယောငျ မဆောငျကွဖို့ရာ ကြှနျတျော မြှျောလငျ့ပါတယျ။
စဈတှမွေို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၂)
၂၀၁၆-ခုနှဈ သွဂုတျလ (၂၆) ရကျ
Rakhine State Government
Previous စပါးစိုကျပေးရသော ဓညဝတီသားတို့ကို ဆနျပွုတျသာ စားစသေောအခါ . . .
Next ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) ၏ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေး (၂၁)ရာစုပငျလုံ ညီလာခံသို့ တငျသှငျးသညျ့ အကွံပွုစာတမျး